न सावधानी छ न भौतिक दूरी, कता हरायो कोरोना? यसो भन्छन् विज्ञ – सुनौलो अनलाइन
न सावधानी छ न भौतिक दूरी, कता हरायो कोरोना? यसो भन्छन् विज्ञ
सुनौलो अनलाइन१ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०८:५३
न सावधानी छ न त भौतिक दूरी । लाग्छ- कोरोना छ भन्नेमा कसैलाई हेक्का छैन। सरकारले लगाएका प्रतिबन्ध सबै खुलिसके । त्यसमाथि दलहरूले हजारौं सर्वसाधारण भेला पार्ने प्रतिस्पर्धा गराएर ‘राजनीतिक मेला’ लगाइरहेकै छन् । तर, कोरोना भने घट्दै–घट्दै गएको देखिन्छ । कारण के हो? आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले विज्ञहरुको धारणासहितको खबर प्रकाशित गरेको छ।
डा.सागरकुमार राजभण्डारी, निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु
कोरोना भाइरस लामो समयसम्म रहँदैन । संक्रमणले एउटा उचाइ लिइसकेपछि घट्न सुरु भएको छ । शरीरमा एन्टिबडी (रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक शक्ति)को विकास भई हर्ड इम्युनिटी (प्राकृतिक रूपमा समुदायको धेरै जनसंख्यामा प्राप्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता)का कारण पनि संक्रमणदर घटेको हुन सक्छ।
डा.प्रदीप ज्ञवाली, कार्यकारी प्रमुख, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएर हो कि वा अन्य कुनै कारण छ भनेर हामी अध्ययन गर्दै छौं । वंशाणुगत कारण वा हर्ड इम्युनिटीको विकासबारे पनि अनुसन्धान नगरी केही भन्न सकिँदैन।
डा.अनुप सुवेदी, संक्रामक रोग विशेषज्ञ
डा.शेरबहादुर पुन, क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
डा.बाबुराम मरासिनी, जनस्वास्थ्यविद्